Labo Wajiilaynta Siyaasiyiinta Puntland | allsanaag
Labo Wajiilaynta Siyaasiyiinta Puntland
Garowe ma sii noqon kartaa caasimad Puntland
Siyaasiyiin reer Puntland qaarkood ayaa aamnisan in Muqdisho ayna sii noqon karin Caasimad Soomaaliyeed. Sababna waxay uga dhigaan in Caasimaddii Soomaali oo dhan ka wada dhaxaysy in maanta beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa gaar isu siiyeen, taas oo ka qaaday sumacddii, sharaftii iyo ixtiraamkii ay Caasimad Soomaaliyeed ku noqon lahayd. Siyaasiyiintani waxay kaloo sheegaan in Muqdisho xoog loogu haysto Xoolo iyo hanti ka wada dhaxaysay Bulshada Soomaaliyeed oo dhan iyo mid gaar loo leeyahay oo dadkii lahaa laga dhacay.
Hadaba maanta Siyaasiyiinta reer Puntland maxay uga hadli waayeen dhaqanka Muqdisho ka jiray mid la mid ah inuu ka socdo caasimadda Puntland ee Garowe, oo siyaasiyiin iyo ciidamo ka soo jeeda magaaladaas ay si gaar ah u sheeganayaan Caasimaddii sida ku meel gaarka ay Bulshada Puntland isugu afgarteen 1998 inay casimad u sii ahaato
Haddii Muqdisho ay ku maqan tahay hanti kawada dhaxaysay umadda Soomaaliyeed. Garowe ma soo dhaafaan deeqaha caalamku ugu deeqo Puntland oo dhan. . Waxana ku maqan xisaab badan oo umadda Puntland ka wada dhaxaysay
Siyaasiyiinta reer Puntland waxay had iyo jeer ku doodaan in Muqdisho horay loogu tegi jiray wax kasta laga bilaabo Teesare ilaa tacliin sare, sidaas awgeed ay doonayaan in maamulka hoos loo daadejiyo. Garowe ayaa maanta wasaarad iyo wakaalad walba oo Puntland ah xafiis ku leedahay,
Qanyare iyo Yalxoow ayaa reer Puntland ku eedayn jireen inay Isbaaro u taalo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Maanta Muxyidiin iyo Faroole ayaa caasimadda Puntland ee Garowe Isbaaro u taalaa, Mana jiraan siyaasiyiin reer Puntland ah oo arintan canbaaraynaya
Ugu danbayntii Siyaasiyiinta reer Puntland inta ay iska dhaafaan labo wejiilaynta iyo eedaynta ay Muqdisho ay had iyo jeer u soo jeediyaan , ma samayn karaan arin aan aan horay sanadkii 1998 markii Puntland la samaynayey aan si fiican looga doodin oo maanta dhib weyn ku haysa Bulshada Puntland iyo dawladnimadii . Taas oo ah in Garowe sii noqon karto caasimadda Puntland iyo sababta ay ku sii noqon karto Casimad Puntland haddii Sanad walba Cabdiraxmaan Faroole Iyo Muxyidiin iyo kooxdiisu ay Isbaaro dhiganayaan
← These Muslim Americans approve of the travel ban SNM ayaan ahay meel kasta oo aan joogo →